Qurba joogta Soomaalida oo shir uga furmay Turkiga – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Qurba joogta Soomaalida oo shir uga furmay Turkiga
21st June 2014 A warsame Af Soomaali 0
Istanbul – Mareeg.com: Qurba-joogta Soomaaliyeed ayaa manta oo ah 21-ka June 2014 shir caalami ah uga furmay magaalada Istanbul ee dalka Turkiga.
Shirkaan oo noqonaya kii ugu horreeyay noociisa oo ay yeeshaan Somalida qurbo-joogta ah ayaa ujeeddadiisu tahay sidii sahmin loogu sameyn lahaa sida ay u wada-shaqeeyaan bulshooyinka Soomaaliyeed ee qurbo-joogta ah.
Shirka ayaa socon doona labo maalmood, iyadoo ay khudbado ka jeedin doonaan xubno uu ka mid yahay wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga, Ahmet Davutoglu, wasiiraddii hore ee arrimaha bulshada Soomaaliya, Dr. Maryam Qasim iyo weliba xubno ka tirsan qurbo-joogta Soomaaliyeed.
Qurbo-joogta Soomaalida ee shirkan ka qaybgalaya ayaa waxay labada maalmood ee uu shirku socdo ka shaqeyn doonaan sidii ay u sameysan lahaayeen hannaan ay ku mideynayaan dhammaan Soomaalida dibadaha ku nool.
Danjiraha Turkiga ee Somalia, Kamaaluddiin Kani Toren oo shirka ka hadlay ayaa sheegay in Soomaaliya aysan xilligan u baahnayn kaalmooyin bani’aadanimo oo la siiyo, balse ay u baahan tahay inay waxyaabo waaweyn lagu caawiyo sida ganacsiga oo kale, si dalku horumar u gaaro.
Sidoo kale, waxaa ka hadlya danjiraha Soomaaliya u fadhiya Turkiga, Maxamed Mursal iyo xubno kale oo khubado wax ku ool ah ka jeediyay, kuwaasoo in looga baahan yahay Soomaalida inay gacmaha is-qabsadaan ayna u guntadaan sidii ay dalkooda dib ugu dhisi lahaayeen.
Turkiga ayaa doonaya inuu xiriir wanaagsan la yeesho dadka Soomaaliyeed, wuxuuna dalkiisa horay ugu qabtay wadahadal dhexmaray dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamulka Somalilnad.
Sawirro: Qaraxii lagu dilay weriye Keynaan
UNSOM & AMISOM oo cambaareeyey dilkii weriye Keynaan